Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo doonaya in xilka laga qaado garsoore Maraga - BBC News Somali
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo doonaya in xilka laga qaado garsoore Maraga
David Maraga waa xaakimkii laalay natiijada doorashadii madaxtinimo ee Kenya
Xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa codsi horgeeyay guddiga adeegga garsoorka Kenya, waxaana jira mooshin la hadal hayo in David Maraga laga geeyo baarlamaanka Kenya .
Xildhibaankan ayaa doonaya in xilka laga qaado xaakimka sare David Maraga oo ahaa xaakimkii riday xukunkii lagu laalay natiijada doorashadii madaxtinimo ee Kenya ka dhacday bishii lasoo dhaafay.
Ngunjiri Wambugu ayaa waxa uu doonayaa in Guddiga Adeegga Garsoorka oo ah laanta dowladdeed ee shaqaalaysiisa garsoorayaasha ay baaritaan ku samayso Maraga oo uu ku eedeeyay in uu fuliyay Afgambi Garsoor.
"Garsoorka waxaa haysta hay'adaha aan dowliga ahayn" ayuu yiri xildhibaankan oo warbaahinta kula hadlay baarlamaanka.
Wargayska Daily Nation ayaa sidoo kale warbixin uu soo qoray ku sheegay in xildhibaanada xisbiga Jubilee ay doonayaan in ay adeegsadaan guddiga la dagaalanka Musuqmaasuqa ee EACC sida laga soo xigtay xildhibaano kale. Sidoo kalana ay qorsheynayaan in ay mooshin hor geeyaan baarlamaanka Kenya.
Ururka xirfadlayaasha garsoorka ee Kenya ee magaciisa loosoo gaabiyo KMJA ayaa sheegay in mooshinkan lala maaganyahay Maraga uu yahay mid salka ku haya xukunkii Maraga uu ku laalay natiijada doorashada, lana doonayo in magaciisa la haleeyo.
Xildhibaan Ngunjiri ayaa Maraga ku eedeeyey in uu mid ka mid ah xaakimiinta maxkamadda sare oo lagu magacaabo Maxamed Ibraahim uu ka hor istaagay in uu qeyb ka noqdo xukunkii maxkamadda sare ay ku laashay natiijada doorashada.
Xaakim Maxamed Ibraahim ayaa xanuunsaday maalin ka dib markii ay bilaabatay dhagaysiga dacwadda, kamana uusan soo qaybgalin maalintii xukunka la shaacinayay, iyada oo xitaa haddii uu kasoo qaybgali lahaa uusan codkiisa wax isbadal ah ku samayn lahayn xukunkii dhacay.
Maraga ayaa ammaan iyo bogaadin ku muteystay xukunkii maxkamadda gudaha dalka iyo dibadiisaba.
Hase yeeshee madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku Maraga ku tilmaamay "burcad", isaga oo ku gooddiyay in uu talaabo ka qaadi doono haddii uu markale ku guuleysto doorashada.
Garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa haysta illaa 21-da bishan sabtembar in ay shaaciyaan xukunkii oo dhan, oo ay ku jiraan sababaha ay cuskadeen markii ay laalayeen natiijada doorashada.
Sawirradii toddobaadkan ugu soo jiidashada badnaa Afrika